ပြည်တွင်း၊ နိုင်ငံတကာနှင့်အားကစားသတင်းများ၊ ဘဝနေထိုင် . . .
တစ်နှစ်စာဝန်ဆောင်မှုများအတွက် တစ်ပတ်လျှင် ၃၁၅ကျပ် (အခွန်ပါပြီး)ဖြင့် အရစ်ကျကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
၃၁၅ ကျပ် (Includ. Tax) for ၇ ရက် Subscription